प्राचिन चिकित्साबाट सम्भव हुन्छ त कोरोनाको उपचार? यस्तो छ WHO को भनाइ! - Bigul News
प्राचिन चिकित्साबाट सम्भव हुन्छ त कोरोनाको उपचार? यस्तो छ WHO को भनाइ!
असोज १४, २०७७ SLPA
कोरोना भाइरसको संक्रमण संसारभर लगातार बढिरहेको छ। विश्वभरको देशमा भ्याक्सिन र यसको औषधि खोजि भईरहेको छ। अब विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ कि हर्बलको ट्रायलको अनुमति दिईनेछ। यदि यो सफल भयो भने संसारभरमा कोरोना उपचारको लागि प्राचिन औषधि उपयोग गरिनेछ। डब्लुएचओको अनुसार यदि कोहि पारम्परिक चिकित्सा उत्पादन सुरक्षित, प्रभावशालि र गुणस्तर सुनिश्चित पाईयो भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले लोकल निर्माणको लागि यसको सिफारिश गर्नेछ।
विश्व स्वास्थ्य संघठणबाट दक्षिण अफ्रीकाको सरकारले कोरोना उपचारको लागि हर्बल औषधि र ट्रायल गर्ने अनुमती मागेका थिए, जसमा डब्लुएचओले हुन्छ भनेको छ । छिट्टै यस औषधि ट्रायल पनि गरिनेछ। डब्लुएचओ अनुसार यो बयान मेडागास्कर देशको राष्ट्रपतिद्वारा आर्टीमीसियामा आधारित एक ड्रिंकलाई प्रमोट गरेपछि आएको हो। यो हर्बल प्लांट मलेरियाको उपचारमा प्रभावी सिद्ध भएको छ। राष्ट्रपति आफैले यो ड्रिंक पिएर जनता अगाडी देखाएका थिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको रीजनल डायरेक्टर प्रस्पर टुमुसीमले रायटर्सलाई भनेको छ कि ‘हामी अहिले हेरिरहेका छौ कि प्राचिन मेडिकल प्रोडक्ट सुरक्षा, प्रभावशालि र गुणस्तरको मापन पूरा हुन्छ कि हुदैन। यदि यस्तो भयो भने विश्व स्वास्थ्य संघठणले यसको ट्रायल र मापनमा निर्माणको सिफारिश गर्नेछ। ‘उनले भने कि अफ्रीका सेंटर फर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिभेन्सन र अफ्रीकन यूनियन कमीशन फर सोशल अफेयर हाम्रो सहयोगी हो र हामी मिलेर कम गर्नेछौ।’
भारत सरकारले देशमा कोरोनाको बढ्दो घटना देखेर ‘पोस्ट कोविड-१९ म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल’ जारी गरेको छ । यस प्रोटोकलमा मानाछेहरुको रिकभरी र कम्यूनिटी लेवलमा भाइरसको रफ्तारलाई कम गर्ने तरिका बताए। स्वास्थ्य मंत्रालयले कोरोनाबाट ठीक भएका मान्छेको घरमा ध्यान राख्ने प्रबंधन गर्नको लागि कदम बताएका छन्। यसमा इम्यूनिटी बढाउने कुराको पनि जानकारी दिईएको छ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयले जुन प्रोटोकल जारी गरेको छ, त्यसमा च्यवनप्राश खाना, प्राणायाम, योग र घुम्ने सल्लाह दिइएको छ।
प्रकाशित : बुधबार, असोज १४, २०७७०७:३३
महिनावारी हुदा प्राय महिलाहरुमा किन हुन्छ उच्च रक्तश्राव? यस्तो छ कारण,!